Suudaan ayaa dib ugu yeertay safiirkii u fadhiyay Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Suudaan ayaa dib ugu yeertay safiirkii u fadhiyay Itoobiya
Suudaan ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyay Itoobiya Axaddii, iyadoo ka xumaatay mowqifka saraakiisha Itoobiya oo ay sheegtay inay diideen dalabkii Suudaan ee ahaa inay dhexdhexaadiyaan colaadda ka socota Tigray.
“Itoobiya waxay hagaajin doontaa mowqifkeeda haddii ay tixgeliso waxa Suudaan samayn karto. ..Waxaa halkii aan gabi ahaanba diidi lahaa dadaalkeeda oo dhan, ”ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda.
Raiisel wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduuk ayaa Arbacadii la hadlay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken colaadda ka taagan waqooyiga Itoobiya ee Tigray, taas oo horseeday qulqulka 53,400 qaxooti tan iyo dabayaaqadii 2020.
Dalabka Hamdok wuxuu ku yimid qaab -dhismeedka madaxtinimadiisa IGAD, koox ay ku jiraan Kenya, Ethiopia, Uganda, Djibouti, Sudan, Uganda iyo Somalia, ayaa lagu yiri bayaanka.
Afhayeennada wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya iyo ra’iisul wasaaraha ayaan isla markiiba ka jawaabin codsiyada faallo ku saabsan Suudaan oo u yeertay safiirkeeda.
Khamiistii afhayeenka ra’iisul wasaaraha, Billene Seyoum, ayaa iska fogeysay suurtagalnimada in Suudaan ay dhexdhexaadiso colaadda gobolka woqooyi ee Tigray.
Waxay ku tilmaamtay xiriirka Khartoum mid “waxoogaa qallafsan” waxayna sheegtay in aaminaaddu ay saldhig u tahay dhexdhexaadin kasta laakiin ay “burburtay” gaar ahaan ka dib “soo galitaankii ciidanka Suudaan ee dhulka Itoobiya.”
Xiriirka waxaa xumeeyay muranka Al-Fashqa, oo ah dhul barwaaqo ah oo ay degeen beeraleyda Itoobiya taas oo Suudaan ay sheegtay inay ku taallo dhinaca xuduudda la calaamadeeyay bilowgii qarnigii 20-aad, taasoo ay Itoobiya diidday.
Xiisadda xadka ayaa imaanaysa xilli Itoobiya, Suudaan iyo Masar ay sidoo kale isku dayayaan inay xalliyaan muran saddex geesood ah oo ku saabsan biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ee biyo-xireenka.
Previous articleCiidamadii hawl gabka Noqday oo ku baaqay in dib loo hawl galinay Itoobiya
Next articleJabhadda Oromada ee OLA iyo TPLF ayaa ku dhawaaqay in ay samaysteen iskaashi Militari.
Yaa lacag badan ka faaiida dhoofinteeda Ethiopia iyo Somaliland?